I-China Industrial igesi tube skid fektri kanye nabakhiqizi | Isicebi
Ingcindezi Ephakeme Yezimboni
I-Industrial Gas Tube Skid
Incazelo yegesi yezimboni yeshubhu skid.
I-Industrial gesi tube skid isetshenziswa kabanzi igesi yezimboni, njenge-H2, He; imodeli ejwayelekile ingu-40ft & 20ft.
amaqembu ethu wobunjiniyela kanye ne-metallurgisation abasebenza ukuklama imikhiqizo esezingeni eliphezulu, ikhodi nokuhambisana okuphathelene nemithetho, ephephile futhi engabizi kakhulu. Sinomugqa ojwayelekile wemikhumbi ekukhiqizweni kodwa futhi sinikezela ngezifiso zemikhumbi ukuze ifane namandla akho athile nezidingo zesikhala. Usebenzisa umshini wokuphamba we-CNC spin owenziwe ngesinki (isipiningi) nge-software yokuphathelene ukufeza izidingo zakho ezithile.
I-Industrial gesi tube skid ingenziwa futhi yakhiqizwa ngekhodi ehlukile kufaka phakathi i-DOT, ISO. Singahlala sigcwalisa isiphakamiso ngevolumu yejometri ehlukile, ingcindezi yokusebenza, ubungako besilinda, ubukhulu bebonke, uhlobo lwama-valves & ukufakwa ngokususelwa esimweni somuntu nekhasimende.
Ama-skype ethu e-Iindustrial Gas tube skids asivele esetshenziselwa inkampani eyaziwayo yamazwe omhlaba emhlabeni, umkhiqizo we-Air, Linde, Air Liquide, Taiyo Nippon Sanso njll ngokusebenza okungabizi, nesici sokusebenza okuphezulu, i-Enric ijabulela idumela eliphezulu.
Ukuphepha kanye nokusebenza kahle yizici ezibaluleke kakhulu, zisetshenziswa kabanzi emhlabeni jikelele futhi zijabulela idumela eliphezulu.
1. Umthamo womkhiqizo wesisindo ulungile, ongenza ukuthi kusebenze ukusebenza kahle kwezindleko;
2. Ama-valve womkhiqizo angenisiwe anekhwalithi ephezulu ngokukhetha uhlobo lomkhiqizo odumile noma ungakhethwa ngokuya ngesidingo samakhasimende.
3. Ama-bursting disc noma ama-valve wokuphepha enzelwe embonini ephakeme ye-Industrial gesi tube skid, eyenza ukusebenza kuphephe kakhulu ngaphansi kwesimo esiphuthumayo.
4. Ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bokukhiqiza nezinto zokusebenza, uhlelo lomshuwalense osezingeni eliphezulu;
5. Ukufakwa ekhoneni okujwayelekile nohlaka ngokuhambisana nesiqukathi, kwenze kube lula ngesikhathi sokuhamba.
Isisindo seTare (Kg)
Amandla Amanzi aphelele
Esedlule: Isitoreji igesi yezimboni
Olandelayo: I-LO2/ LN2/ LAr ​​Industrial Gas Semi-trailer
i-helium tube skid
IHydrogen Tube Skid
yezimboni zegesi yezimboni
oxgen tube skid